RAHARAHA APOLLO 21 : Ho vita amin’ity herinandro ity ny fihainoana ireo voampanga – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:36
Hivoaka tsy ho ela ny didim-pitsarana momba ity raharaha ity.
Accueil/Politika/RAHARAHA APOLLO 21 : Ho vita amin’ity herinandro ity ny fihainoana ireo voampanga
RAHARAHA APOLLO 21 : Ho vita amin’ity herinandro ity ny fihainoana ireo voampanga
Herinandro faharoan’ny fitsarana ireo voampanga tamin’ilay raharaha Apollo 21 amin’ity herinandro ity. Ampahany vitsy amin’ireo voampanga sisa no hohenoin’ny fitsarana ato anatin’ny andro vitsy. Izany hoe, ho vita amin’ity herinandro ity ny fihainoana ireo voampanga rehetra. Ho an’ny omaly, Andriamatoa Aina Marie Razafindrakoto sy ny Jeneraly misotro ronono Razakarimanana Ferdinand no nohenoina teo anatrehan’ny Fitsarana.
Lucien R. 14 décembre 2021
Tsy ho ela intsony dia ho fantatry ny rehetra ny marina mahakasika ilay raharaha voalaza fa nifofoana ny ain’ny Filoham-pirenena sy olona ambony maromaro teto amin’ny firenena. Taorian’ny fihainoana ireo voampanga rehetra efa nandalo teo anoloan’ny fitsarana dia efa manomboka hitahita soritra ny tena zava-nisy marina manodidina ity raharaha ity. Ho an’ny omaly manokana, Andriamatoa Razafindrakoto Aina Marie no nohenoina teo anatrehan’ny fitsarana. Ny tenany izay mpiasa eo anivon’ny banky foiben’I Madagasikara, ary voarohirohy ho mpiray tendro tamin’I Paul Rafanoharana tamin’ny famolavolana ny tetibola Apollo 21. Araka ny fiarovantenany anefa, dia mpiara-miasa tamin’ny fampihodinana ny orinasa Tsara First no hiarahany amin’i Paul Rafanoharana. Tsy maintsy natao tany aminy ihany koa ny foiben’ity orinasa ity satria tany no nisy trano nalalaka afaka nandray izany, hoy Razafindrakoto Aina Marie. Tao anatin’izany rehetra izany, nandà marindrano, ary nilaza ho tsy niray tsikombakomba tamin’I Paul Rafanoharana ny tenany tamin’ny fananganana ny tetibolan’ny Apollo 21. Raha mahakasika Orinasa Tsara First kosa indray dia notsindriany fa orinasa ara-dalàna tsara, ary efa mihodina.
Nohenoina ny Jeneraly Razakarimanana Ferdinand
Olona faharoa nohenoin’ny Fitsarana omaly ny Jeneraly misotro ronono, Razakarimanana Ferdinand. Isan’ny iampangana ity manamboninahitra ity ny fidirana amina fikambanan-jiolahy, sy ny fikononkononana fanonganam-panjakana. Nandritra ny fihainoana azy anefa, nanizingizina ny tenany fa tsy maharaka ary tsy mahafantatra ny momba ny raharaha Apollo 21. Nivoitra nandritra ny fanadihadiana natao taminy, araka izany, fa ny lisitrana anarana nalefan’ny Jeneraly Ramahatra Victor tany amin’ny tomponandraikitra iray miaraka amin’ny Fitondram-panjakana no nahatonga azy ho voasaringotra tamin’izao raharaha izao. Izany hoe, nialohan’ireny fanovana Governemanta farany teo ireny, dia nisy tomponandraikitra iray nangataka tolokevitrana anarana olona vitsivitsy tamin’ny Jeneraly Ramahatra Victor ho atao Minisitra ao amin’ny Governemanta. Tamin’izany no nandefasan’ny Jeneraly Ramahatra Victor ny anaran’ny Jeneraly Razakarimanana Ferdinand tany amin’ny mailaka ho an’io tomponandraikitra io. Fandefasana anarana izay tsy fantatry ny Jeneraly Ferdinand Razakarimanana akory, araka ny fiarovantenany. Izany indrindra io maha voasaringotra azy io satria mifandraika tamin’ilay tetika efa voasoratra tao amin’ny Apollo 21 ity mailaka nalefan’ny Jeneraly Ramahatra, nanononany ny Jeneraly Razakarimanana, ity.
Marihina fa mbola hitohy androany ny fihainoana ireo voampanga sisa tsy nandalo teo anoloan’ny fitsarana, ary tsy ho ela dia ho vita tanteraka ny fihainoana azy rehetra.
FIAROVANA NY MPANJIFA: Mikaon-doha miaraka ny Fanjakana sy ny mpamongady
PRAIMINISITRA NTSAY CHRISTIAN: “Tsy misy olana na dia kely aza eo amiko sy ny Filoha”
SEHATRA IRAISAMPIRENENA : Maniry ny hampitomboana isa ireo Malagasy mitazona handray ambony ny Filoha
ILAKAKA : Tra-tehaka ny rongony 245 kg, jiolahy iray sarona